Imidlalo – Isigaba – Windows – Vessoft
Imidlalo – Windows
Imidlalo System nokwenza Ithuluzi ngcono ukusebenza uhlelo nokwandisa Gameplay. Isofthiwe ikuvumela ukuba afeze nokwenza kwimodi okuzenzakalelayo noma manual.
Imidlalo System nokwenza Ithuluzi ukwandisa ijubane yokudlulisela idatha phakathi kwekhompyutha yakho kanye kwiseva yomdlalo. Uhlelo ikuvumela ukuba ngcono ijubane uxhumano in imidlalo ehlukahlukene athandwayo.
Imidlalo Screen bamba Isofthiwe obusebenzayo wathumba isiqophi kusuka computer yakho. Isofthiwe kuhlanganisa ubuchule ekhethekile ukuthi ukuvimbela umthelela ijubane izicelo ngesikhathi kumarekhodi abo.
Imidlalo Inethiwekhi Internet The popular phakathi gamers emulator inethiwekhi yendawo. Isofthiwe iqinisekisa ukuxhumana okuphephile nabanye abadlali futhi ine amathuluzi amaningi ukwenza kwamukeleke.
Imidlalo Education Isofthiwe ukwakha kanye ukuxazulula cryptographs. Isofthiwe kuhlanganisa amathuluzi amaningi ukuze adale izinhlobo ezahlukene cryptographs.